TAKSIBE ETO ANTANANARIVO Gaboraraka amin’izao volon’andro fety izao
Samy manao izay danin’ny kibony ny sasany amin’ireo mpamilin’ny taksibe sy ny mpanampy azy amin’izao fety izao.
Ny saran-dalana tsy misy tapa-dalana kanefa efa nampidinin’ny fitondrana izay mijoro ny vidin-tsolika. Tsy ahitana fanajana ireo mpandeha raha ny filazan’i Michel R. vavolombelona iray. Ny seza anefa mifatotra sady manery ny aoriana (sary). Tsy vitsy ireo mihodina an-dalana. Ny sasany mody atao tsy velona ny fiara fa atosika kely na sokafana ny sarona motera dia ahintsana ny mpandeha. Tsy hita miasa ny ankamaroany, indrindra rehefa hariva ny andro ka mirotsaka ny orana.
Isaky ny hampakatra saran-dalana ihany no ahitana kalitao ireo fiara mpitatitra ka manaraka ny bokin’andraikitra. Miandrandra tambajotran-tserasera ho amin’ny fitarainana mikasika ny taksibe manokana na “doléance” tantanan’ny manampahefana ny mponin’Iarivo. Ny vesatry ny zotram-pitoriana eto amin’ny Nosy koa mampanjaka io gaboraraka io, tsy manam-potoana hivezivezena hitoriana any amin’ny fitsarana ny lasibatra. Vitsy no sahy mitory tahaka ilay mpitandro filaminana nijoro tamin’ny taksibe nampitohy an’i Mandroseza sy 67ha nihodina an-dalana.